अन्तराष्ट्रिय पदकधारी साेभालाई पाखा लगाउँदै सिता राई सेमिफाइनलमा | | Neplays.com
अन्तराष्ट्रिय पदकधारी साेभालाई पाखा लगाउँदै सिता राई सेमिफाइनलमा
By Neplays	 Last updated Apr 18, 2019
पाकिस्तान अन्तराष्ट्रिय सिरिजमा मिश्रीत युगलमा स्वर्ण तथा नेपाल अन्तराष्ट्रिय सिरिजमा मिश्रीत युगलमा रजत पदक हात पारेकी एपिएफकी शोभा गौचनलाई पराजित गर्दै प्रदेश १ की सिता राई अन्तिम चारमा स्थान पक्का गर्न सफल भएकी छिन् । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको ११ औं बरियतामा रहेकी सिताले ३ नं. बरियताकी शोभालाई २१ । १७, २१ । १५ ले पाखा लगाउन सफल भएकी हुन् । अव सिताले फाईनल प्रवेशका लागि नेपाल नं. १ सेनाकी नङ्खशल देवी तामाङ्खको सामना गर्ने छिन् । सेनाकी नङ्खशलले सेनाकै रञ्जना भट्टलाई २१ । १८, २१ । १२ ले पन्छाईन् ।
यस्तै अर्को खेलमा सेनाकी अनुमाया राईले उदियमान खेलाडीको रुपमा रहेकी एपिएफकी जेसिका गुरुङ्खलाई २१ । १६, २१ । ९ ले पाखा लगाउँदै सेनाकै रशिला महर्जन संगको भेट पक्का गरिन् । जेशिकाले महिला टिम ईभेन्ट्सको प्रतिस्पर्धामा नेपाल नं. एक खेलाडी नङ्खशललाई पराजित गरेकी थिईन् । रशिलाले प्रदेश १ की सिमा राजबंशीलाई २१ । १४, २१ । ११ ले पराजित गरिन् ।
पुरुष एकल तर्फ सेनाका नंम्बर एक खेलाडी रत्नजित तामाङ्ख आफ्नो उपाधी रक्षा तर्फ अग्रसर भएका छन् । उपाधीका नजिक पुग्ने क्रममा उनले नेपाल पुलिसका जीवन आचार्यलाई २१ । १०, २१ । ११ ले पराजित गरे । अव रत्नले फाईनल प्रवेशका लागि प्रदेश १ का प्रिन्स दाहालसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । प्रिन्सले पुरुष टिम प्रतिस्पर्धाको पुरुष एकल तर्फ रत्नलाई पराजित गरेका थिए । प्रिन्सले सेनाका प्रफुल महर्जनलाई २१ । १०, २१ । १० ले पन्छाउँदै रत्नसंगको भेट पक्का गरेका हुन् । यस्तै गरि पूर्व नेपाल वान बिकास श्रेष्ठले सेनाका नविन श्रेष्ठलाई २१ । १५, १५ । २१, २१ । १६ ले पन्छाउँदै अन्तिम ४ को यात्रा तय गरे । अव फाईनल प्रवेशका लागि बिकासले सुदूरपश्चिमका दीपेश धामी संग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । दीपेशले पुलिसका दीपक बोहरालाई २१ । १७, २१ । १५ ले पन्छाउंदै सेमिफाईनलमा स्थान पक्का गरेका हुन् ।
दाङ्ख घोराहीस्थित कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको महिला युगल तर्फ सेनाका नङ्खशल देवी तामाङ्ख र अनुमाया राईको जोडी तथा अमिता गिरी र रशिला महर्जनको जोडी पनि सेमिमा प्रवेश गरेका छन् । तामाङ्ख र राईको जोडीले कर्णाली प्रदेशका पुष्पा शाही र सामना भट्टराईको जोडीलाई २१ । १०, २१ । १० को सोझो सेटमा पराजित गरे । यस्तै गिरी र महर्जनको जोडीले प्रदेश ३ का तारा आले र मनिषा खड्काको जोडीबाट वाक ओभर प्राप्त गरे । यस्तै सेमिफाईनल प्रवेश गर्ने क्रममा प्रदेश १ का सिता राई र सिमा राजबंशीको जोडीले प्रदेश ३ का महिमा श्रेष्ठ र सफी खत्रीको जोडीलाई २५ । ५, २५ । ३ ले तथा एपिएफका पुजा श्रेष्ठ र जेशिका गुरुङ्खको जोडीले सेनाका लोक्तमा राई र रञ्जना भट्टको जोडीलाई २१ । १२, २१ । १२ ले पाखा लगाए ।
प्रिन्स दाहाल दक्षिण एशियाली यु-२१ रिजनल ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिपकाे फाइनलमा
ब्याडमिन्टन टोली माल्दिभ्स प्रस्थान
विश्व ब्याटमिन्टनकाे बरियतामा प्रिन्सकाे फड्काे
अन्नपूर्ण पोस्ट ब्याडमिन्टनः नवीन श्रेष्ठले हराए शीर्ष वरियताका अष्ट्रेलियन खेलाडीलाई
अब ओलम्पिकमा नेपाललाई पदक दिलाउने धाेकाे छ : प्रिन्स दाहाल (भिडियाे)
उदयीमान युवा ब्याटमिन्टन खेलाडी प्रिन्सकाे बरियतामा छलाङ, १०३ बाट ५४ औ स्थानमा पुगे